Volana Desambra 2014
Krismasy 2014 andro Alakamisy
Andro ankalazan'ny Kristiana ny "fahatongavan'ny Zanany sy ny fanantanterahany ny "Teny tonga Nofo"" tokoa ny andro ka nizotra tao @ Chapelle ireo Malagasy maro eto Orléans sy ny manodidina tonga nitsaoka sy nidera ary nanome ny voninahitra ho Azy irery.
Niisa 117 ny lehibe ary 25 ny ankizy tonga nanatrika ny fanompoampivavahana.
Nofaranana tamin'ny fizarana Chocolat tetsy ambaravarana izany andro lehibe izany.
Asabotsy 27 Desambra 2014 @ 15h- Fiangonana Paris Chauchat etsy Paris 9è: Fotoana hanomezana voninahitra an' Andriamanitra ary hanokanana ny Pst Lydia Ravalitera ho Mpitandrina rehefa avy nanao ny asan'Andriamanitra nandritran'ny 10 taona [email protected] Tafo Orléans-Amiens-Troye.
Nasaina manokana ny Tafo Orléans satria teto izy no nandrindra voalohany ary koa nanokatra ny Sampana SVK folo taona lasa izay.
Alahady 28 Desambra 2014 ao @ Chapelle St Marc @ 10h30: Fotoana natokan'ny Tafo Orléans hanaovana ny Fankalazana ny faha 55 taonan'ny FPMA Frantsa.
Alahady 04 Janoary 2015 ao @ Chapelle St Marc @ 10h30 : Alahady hifampiarahabana ny fahatratrarana ny taona 2015 ary hanolorana solombodiakoho ireo raiamandreny mihoatra ny 65 taona eto amin'ny Tafo Orléans.
Alahady 21 Desambra 2014
Alahadin'ny Sampana Velona eto amin'ny Tafo Orléans natao tao @ ERF [email protected] 14h30 ary nandraisan'ny Sampana rehetra anjara.
Niisa 107 no nanatrika izany fotoana izany.
Tao aorian'izany dia natao ny fiarahana misakafo tao @ Salle Soulas ka teo @ 9O teo ny olona niaranikorana tao.
Fotoana notarihan'ny Diakona eto amin'ny Tafo, Randriatsarafara, fa ny Fandraisana sy ny Toriteny dia nataon'ny Mpitandrina mpandrindra ny Tafo.
Niisa: 70 ny olona tao ka 57 ny lehibe ary 13 ny ankizy.
Nofaranana [email protected] fialàna hetaheta toy ny fanao isaky ny voalohan'ny volana ny fiarahana io alahady io.
-Androany @ 2o.h na (14h) Fivoriana hataon'ny SVKO any @ tranon'i Eugène mivady
-Famerenana Sekoly atao androany tolakandro ihany koa ato @ Chapelle.
-Ny Chorale AMF dia ny Asabotsy 13 desambra tolakandro @ 3 sy 1/2 o.h. na 15h30 eto amin'ny Chapelle no hanao koa ny famerenana toy ny mahazatra.
-Ny fankalazana ny Noely hitambaran'ny Kristiana eto Orléans ka hatao ny Alahady 14 Desambra @ 4o.h. na (16h) ao @ Temple ERF 2 rue du Cloître St-Pierre Empont ao Orléans.
-Ny andron'ny ny Sampana miray eto amin'ny Tafo kosa dia ny tolakandron'ny Alahady 21 Desambra ary hatao etsy amin'ny ERF ihany koa.
Alahady 14 Desambra 2014 @ 4 o.h na (16h) ao @ EPUF na ERF: Fankalazana Noely hiraisan'ny ERF-GBU ary FPMA Orléans. Hisy fandraisana anjaran'ny SA sy ny ny AMF amin'izany fotoana izany.
Alakamisy 18 Desambra 2014 @ 8 o.h na (20h) etsy amin'ny Centre oecuminique etsy La Source. Hisay fandraisan'anjaran'ny FPMAO amin'ny hira 70: Iza moa io zazakely ao Betlehema...
Alahady 21 Desambra 2014 @ 2 o.h. na (14h) ao amin'ny ERF : Fankalazan'ny Sampana miray rehetra eto amin'ny Tafo ny Noeliny: Hatao io hariva io izany ny fotoampivavahana fanao isaky ny Alahady maraina dia tohizana amin'ny Fampisehoan'ny Sampana Velona tsirairay:
SA; SVK; AMF; SZM.
Avy eo moa dia hisy ny fiarahana mihinana ny Sakafo novimbin'ny tsirairay hifampizarana hanaovana ny sakafo AGAPE. Ho faranana @ 8 1/2 o.h na 20h30 ny fotoana.
Volana Novambra 2014
Alahady 30 Novambra 2014
Tontosa soa amantsara ny teny nampitaina tamin'iny Alahady iny, nalaina tao @ Marka 13 :33 "Mitandrema, miambena, ka mivavaha;...".nampahalala fa ny an'Andriamanitra dia tsy araky izay fotoanantsika akory (ora; andro; volana ...)fa "Intemporel", fampianarana nataon'i Pst Joseph Rakotoarimanana.
Niisa 40 ny olona ary 33 ny lehibe ary 7 ny ankizy.
-Fisaorana no atolotry ny SZMO ireo nanotrona sy nividy ireo voahomana rehetra [email protected] 23 Nov lasa teo: ka Andriamanitra be fitiavana ny hamaly sy hanonitra avo maro heny izay lanin'ny tsirairay tao.
-Vita soa ny fivoriamben'ny SVKO ka voatsangana ny Birao vaovaon'ny Sampana [email protected] 23 Nov teo.
-Isaorana ireo solontenan'ny Tafo nanatrika ny fankalazana ny 10è Tafo Arago [email protected] Asabotsy 29 Nov teo tany Paris 18è.
Amin'iny volana Desambra iny dia hisy
-Ny fanokanana an'i Pst Lydia Ravalitera dia ny Asabotsy 27 Desambra: ny toerana sy ny ora dia mbola ho lazaina eto ihany.
Alahady 23 Novambra 2014
Alahadin'ny SZMO na Sampana ZavaManeno eto Orléans.
Fotoana notarihan'i Atoa Andriamampionona S Filohan'ny SZMO. Nandray anjara tao avokoa ny ankizy rehetra manantalenta eto amin'ny Tafo Orléans: Tiana :Gitara- Harisetra:Clavier -Maeva:Violon- Mahasetra:Gitara- Mahefa:Orgue.
Niisa 63 ny olona tonga, lehibe:50 ary ny ankizy 13.
Nofaranana tamin'ny fivarotana ny plateaux repas ny fotoana, izay atao famatsiana ny kitapombolan'ny SZMO.
Ny alahady faha 30 Novambra 2014 @ 10h30.
Alahady 16 Novambra 2014
Tamin'ny tsy nahateo ny Mpandrindra ny Tafo dia ny Diakona no nitarika ny fotoana. Novoaboasana tamin'izany ny fanoharana [email protected] fitsinjarana ny talenta : Matio 25:14-30.
Niisa 57 ny olona ka 44 ny lehibe ary 13 ny ankizy.
-Antso SVKO amin'ny Assemblée Générale, ka hanaovana ny fifidianana Mpitambola.
-Filazana sy tatitra avy amin'ireo solotena avy tany amin'ny Synoda Mulhouse:
Tsy niova ireo mpitantana ao @ Birao Foibe teo aloha ankoatran'i Pst Seth.
-Ny Sampana SZM Orléans dia hanao ny [email protected] 23 Nov ho avy izao, ka hezahana sy amporisihana ireo manana talenta eto amin'ny Tafo mba handray anjara amin'izany.
Hisy plateau repas hamidy avy eo ka 7€ ny ho an'ny lehibe ary 5€ ny an'ny ankizy.
Alahady 02 Novambra 2014
Alahadin'ny mpitandrina eto amin'ny Tafo.
Tonga nitarika sy nanao ny toriteny ny mpitandrina Roger Rafanomezantsoa tamin'ity Alahady ity araky ny fanao moa dia ny mpitandrina no manao ny fampandraisana fotsiny.
Ny fampianarana tao dia ny avy ao @ Matio 23:1-10: tsy ny toerana no tadiavina fa ny asa miaraka aminy..
Niisa 67 ny lehibe ary 16 ny ankizy.
Nofaranana [email protected] fiarahana manala hetaheta natolotry ny Fg ny fotoana.
Noraisina sy noarahabaina tao ny Mpivady vao: Jaonary sy Bearivo Sandy.
-Fampatsiahivana ny Alahadin'ny SZM Orléans @ 23 Novambra
-Fisaorana natolotry ny SA faritany sy ny SVK ho an'ireo mpizaika [email protected] Oktobra.
-Synoda lehobe any Mulhouse ny 8-11 Novambra 2014
-Alahady 16 Novambra eto @ Chapelle @ 10h30: Alahady fahatelo.
-Alahady 23 Novambra Alahadin'ny SZM, hisy plateau repas hamidy amin'io.
Volana Oktobra 2014
Alahady 26 Oktobra 2014
Alahady fahefatra notarihan'ny Diakona ary toy ny fandaminana dia nisy fisintonan'ireo mpianatra madinika nanao ny Sekoly Alahady tao aorian'ny Toriteny nentin'ny Filoha.
Niisa 38 ny lehibe ary 11 ny ankizy.
Fampianarana nalaina avy @ Matio 22: 15-22 no nataon'ny Mpitandrina Raharijaona Marie Angèle ka nafahan'ny maro nandray anjara [email protected] fotoana tsy lava loatra.
Niisa: 37 ny lehibe ary 11 ny ankizy.
Nisintona ihany koa ireo zaza madinika nanao ny SA taorian'ny toriteny araky ny fandaminana nataon'ireo Mpampianatra.
-Nolazaina sy nentina ny vokatra azo [email protected] Alahady telo nanaovana ny fanatitra (volana Jona sy Jolay).
-Naseho ny fiangonana ireo hanolotra ny tokantranony eo ambany fitarihan'Andriamanitra @ Asabotsy 25 Oktobra ho avy izao.
-Ny Komity ara-potoana dia nahemotra ny 26 Oktobra nohon'ny tsy nahateo ireo mpiandraikitra ny vola fa mbola tany @ Zkb SVK tany Jambville.
Alahady 26 Oktobra ao @ Chapelle St Marc @ 10h30.
Amin'io Alahady io ihany koa no hivorian'ny Komitin'ny Tafo fa ny tolakandro.
Alahady 05 Okotobra 2014
Nitohy tany ampiangonana tao @ Chapelle St Marc ny fananteram-bokatra dingana faha-telo.
Niisa 45 teo ny lehibe ary 6 ny ankizy.
Rehefa nirava avy teo ny mpiangona dia nandeha nanadio trano tary @ Cigogne indray sady namarana ny tsy lany rehetra tany.
Ny fiangonana manaraka dia ny Alahady 19 Oktobra @ 10h30 ihany. Alahady Fampianarana.
Ny fampianarana amin'izany dia tarihan'ny Mpitandrina Marie Angèle.
Hisy fivoriana ara-potoana ho an'ny Komity ny Asabotsy 18 Oktobra. Ny ora dia ho lazaina miandalana eny ihany.
Asabotsy 04 Oktobra 2014
Vita soa amantsara ny Fetim-piangonana nataon'ny Tafo Orléans tetsy @ Salle Cigogne.
Samy afapo avokoa ny mpandray anjara na ny mpanatrika na ny natrehana. Koa izany no anehoana hatrany Dera sy Laza ho an'ilay Nahary.
Nisy solontena avokoa ireo Tafo teto amin'ny FAfAts izay isaorana azy ireo manokana.
Nisy kosa anefa ireo tsy maintsy nandeha namonjy ny tany @ Tafo Fahazavana izay nanao ihany koa ny Fetim-piangonany [email protected] io andro io.
Alahady 07 Septambra 2014
Alahady fidirana @ taom-pianarana 2014-2015 sady Alahady natokantsika hanaovana ny adidy ho an'ny FMM. ihany koa.
Nisy fandraisana ny fanasan'ny Tompo ary nisy fivorian'ny raiamandrenin'ny mpianatra Sekoly Alahady (SA) taorian'ny fotoana.
Isan'ny olona: 67 -Lehibe: 56- Ankizy: 11
Nisy olona 5 mianaka vao tonga eto amin'ny Tafo.
Nofaranana tamin'ny fanalàna hetaheta ny fotoana.
-Tsihahivina ny Fetimpiangonana 04 Oktobra 2014 ataon'ny Tafo.
Izany dia hiantsoana ny fandraisan'anjaran'ny vahoakan'Andriamanitra eto Orléans tsirairay fa antoky ny fampandrosoana ny Fiangonan'i Kristy navelany amintsika eto Orléans io. Koa angatahana ny fandraisan'anjaran'ny daholobe ao @ Vaomiera mampety azy: Ampiasaina izay Talenta sy Soa rehetra izay napetrany amin'ny tsirairay.
-Ny vaovao hafa kosa dia momban'ny Fivorian'ny Komity Maharitra (KM) sy ny fanomanana ny Synoda Lehibe faha 25 any Mulhouse.
Fotoana Volana Septambra
-Ny fivorian'ny Sampana izany dia misokatra araky ny fandaminan'ny isantsampana avy.
-13 Septambra: Fivoriana tsy arapotoana hataon'ny Komitin'ny Tafo ho fandavorariana ny Fetimpiangonana: fananganana ny Vaomiera samihafa-Lakozia sy Sakafo-Services sy Tsakitsaky-Trano sy ny rentiny-Fanentanana sy ny fitaovana maneno(sono)-Entimanana- Kilalalo sy Fanomezana.
-14 Septambra: Alahady hiarahan'ny Tafo FPMA sy ny EPUF Orléans.
Hatao any @ EPUF (ERF) Orléans @ 10h30: Hisy fandraisana anjara hataon'y FPMA mandritry ny fotoana. Hisy ihany koa tsakitsaky hiarahan'ny roa tonta.
-21 Septambra @ 10h30 ao @ Chapelle St Marc: Alahady fahatelo ary hisy fampianarana.
Amin'io ihany koa no hakàna sy hijerena ny fizotry ny Fisoratana fandraisana anjara @ Fetimpiangonana, izany dia tokony efa natao mialoha fa fanindriana ny amin'io.
-28 Septambra @ 10h 30 ao @ Chapelle St Marc: Alahady fahefatra
Hijerena ihany koa ary fanomanana ny Fetimpiangonana 04 Oktobra etsy Salle la Cigogne.
Challenge : La bible en 1 an
Archives du blog janvier 2019 ( 1 ) décembre 2018 ( 3 ) octobre 2018 ( 1 ) septembre 2018 ( 1 ) juillet 2018 ( 1 ) juin 2018 ( 1 ) mai 2018 ( 2 ) avril 2018 ( 1 ) mars 2018 ( 2 ) février 2018 ( 1 ) janvier 2018 ( 1 ) décembre 2017 ( 1 ) novembre 2017 ( 1 ) juillet 2017 ( 1 ) avril 2017 ( 2 ) mars 2017 ( 1 ) février 2017 ( 5 ) janvier 2017 ( 4 ) décembre 2016 ( 1 ) novembre 2016 ( 1 ) octobre 2016 ( 1 ) septembre 2016 ( 1 ) juillet 2016 ( 1 ) juin 2016 ( 1 ) mai 2016 ( 1 ) avril 2016 ( 1 ) mars 2016 ( 1 ) février 2016 ( 1 ) janvier 2016 ( 1 ) décembre 2015 ( 1 ) novembre 2015 ( 1 ) octobre 2015 ( 1 ) septembre 2015 ( 1 ) mai 2015 ( 1 ) avril 2015 ( 1 ) mars 2015 ( 1 ) février 2015 ( 1 ) janvier 2015 ( 1 ) décembre 2014 ( 1 ) novembre 2014 ( 1 ) octobre 2014 ( 1 ) septembre 2014 ( 2 ) juillet 2014 ( 1 ) juin 2014 ( 1 ) mai 2014 ( 1 ) avril 2014 ( 1 ) mars 2014 ( 2 ) février 2014 ( 1 ) janvier 2014 ( 2 ) décembre 2013 ( 1 ) octobre 2013 ( 2 ) septembre 2013 ( 2 ) août 2013 ( 1 ) juin 2013 ( 2 ) mai 2013 ( 3 ) avril 2013 ( 2 ) mars 2013 ( 5 ) février 2013 ( 3 ) janvier 2013 ( 6 ) décembre 2012 ( 8 ) novembre 2012 ( 13 ) octobre 2012 ( 12 ) septembre 2012 ( 1 )